Schedulicity: SaaS Kugadzwa Kusanganiswa | Martech Zone
Chitatu, November 30, 2011 China, December 1, 2011 Douglas Karr
Kana usati wanzwa nezvazvo Schedulicity, iwe ucha .. kana iwe uchave uchishandisa iko nekukurumidza! Vatova nevashandisi vanosvika zviuru gumi nezvishanu, Schedulicity inopa chero bhizinesi rinogadza mamiririri kuti apinze zviri nyore online, facebook uye nhare kuzvigadzirira kubhizinesi ravo. Iyo sisitimu inodhura kwazvo… $ 19 pamwedzi kune mumwe mushandisi kana $ 34 pamwedzi kune vashandisi vazhinji. Iyo kambani yakavhurwa gore nehafu yapfuura uye ine yakasimba uye yakakwana ficha inosimbisa pane diki uye epakati saizi bhizinesi.
Schedulicity iri kupa masimba ekugadzwa kwemakambani mune anopfuura makumi mana makumi mana nemashanu ma verticles, pazvinhu zvese kubva pakufamba kwembwa, kune vanogadzira mapombi, kune nyanzvi dzezvipikiri uye masalon salon. Kuzivikanwa kwebasa kunozvitaurira, neinopfuura 45% yevatengi vatsva kusaina kuburikidza nekutumira uye vanopfuura mazana mashanu evatengi vari kuwedzerwa pasvondo. Sevhisi ine 60% inoshamisa yekuchengetedza mwero!
Nzvimbo dzinokosha dzinosanganisira:
Kugadzwa pamhepo Kubhuka.
Bvumira vateveri kuti vagadzire maAgadziriro zvakananga kubva kune yako Facebook peji.
Yakazara nharembozha inobvumira vatengi vako kunyorera maappointimenti newe chero nguva, chero kupi.
Makirasi, mashopu kana zviitiko zveboka inotsigirwa, ichikubvumidza iwe kuzadza uye kuzadza makirasi ako.
Inopa chikuva chekutaurirana nevatengi vako nezve specials uye kushambadza iine anopfuura makumi manomwe nemashanu mavara, echinyakare matemplate Izvi zvinosanganisira kugona kuwedzera mameseji eupsell kune zviyeuchidzo zvekugadzwa!
Schedulicity ine vatengi, tutori uye maturusi anobatsira pamwe nenharaunda hombe yevashandisi vanogona kugovana matipi akabudirira.
Schedulicity haidi chero yakaiswa software pane yevatengi saiti, ingori vaviri script mateki anounza iwo interface… saka ivo vanogona kusanganisa neyako yazvino webhusaiti mune maminetsi maminetsi. Zvakare, vane Facebook integration kuitira kuti vateveri vako vagone kubaya pane yako purogiramu uye nekukurumidza kuita musangano kubva kuFacebook:
Schedulicity haisi yekungoronga papuratifomu, inonyatso kukubatsira iwe kurapa akavhurwa maappointho sekunge ari ekuverenga. Mabhizinesi anopihwa ekushambadzira maturusi ekuvabatsira kuzadza iwo marongero, vachishandisa popup yekupa ficha:
Kubata kukwidziridzwa kwakabatanidzwawo mumhinduro.
Uyu muenzaniso wakanaka wevimbiso ye Software seMhinduro. Nekupa chakasimba chimiro kune ruzhinji, Schedulicity inokwanisa kupa yakasimba uye inodhura chigadzirwa kune varidzi vebhizinesi. Schedulicity iri kuvhura zvakare chirongwa chitsva chekutumira vatengi. Sign kusaina yemahara muedzo account ku Schedulicity.
Tags: sarudzomusangano wekugadzwapurogiramu yepaIndanetikuronga pamhepopurogiramu